[Samsung Galaxy Ace] Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka la tirtiray .
Just tirtiray farriimo muhiim ah oo ku saabsan aan Samsung Galaxy Ace shil. Oo waxaan iyaga u doonayaan in dib. Ma suroobi karaa waddo inuu ka soo kabsado SMS tirtiray on Samsung Galaxy Ace? Ku soo dhowow si aan qaar ka mid ah calaamadahaas. Thanks badan.
Talo koowaad waa in la joojiyo isla markiiba adiga oo isticmaaleya isticmaale Samsung Galaxy Ace marka aad ka heli gaartay fariin. Waxaad u abuuri doonaa xogta cusub oo ku saabsan telefoonka haddii aad sii wado in la isticmaalo, iyo xogta cusub overwrite karaan kuwa tirtiray. Markaas ka heli Samsung Galaxy Ace qalab kabashada fariin u dhaqso badan iyaga dib u soo ceshano. Ayaa si degdeg ah aad u qabtaan soo kabashada, fariimaha ka badan laguu soo celin karo.
Sida in Samsung Galaxy Ace qalab kabashada fariinta, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , xirfad iyo fududahay in la isticmaalo. Waxa ay u ogolaataa in aad ka bogsato xog badan fariimaha tirtiray ka Samsung Galaxy Ace, sidoo kale xiriiro, sawiro iyo video. Waxaad ku eegaan kartaa fariimaha tirtiray ka hor soo kabashada, si aad u hubiso in ay xaqiiq tahay qalab waxtar leh aad u dhigi kara.
Kabsado xogta Android ay si toos ah u baar telefoonka aad Android & kiniin.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo eegista soo kabsadaan wixii aad rabto in aad ka telefoonka aad Android & kiniin.
Taageerada typles kala duwan file, oo ay ku jiraan Messages & Xiriirada & Sawiro & Videos & Audio & Document.
Taageerada 6000+ daydo Device Android & OS Android kala duwan.
Kabsado Messages Android
Kabsado Android Photos
Kabsado Android Videos
Samsung oo ka soo kabsado Data
Samsung Galaxy Ace: kabsado fariimaha qoraalka ah la tirtiro
First of dhan, aynu hubi waxa Wondershare Dr.Fone for Android u eg. Waxaa Orod on your computer ka dib ku rakibidda, oo aad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota.
Tallaabada 1. Isku aad Samsung Galaxy Ace in kombiyuutarka (awood debugging USB)
Ka dib markii socda barnaamijka, xiriiriyaan Samsung Galaxy Ace in kombiyuutarka. Haddii aad karti debugging USB ah ee aad taleefan ka hor, waxaad si toos ah boodi kartaa tallaabada labaad. Haddii aan, waxaad heli doontaa suuqa kala hoose, oo aad u baahan tahay in la raaco hab hoose si aad u awood debugging USB hadda:
Tallaabada 2. Falanqeeyaan oo baarista Samsung Wave xogta tirtiray waxa ku
Ka hor inta aad ka baareyso telefoonka, waxaad u baahan tahay inaad marka hore u falanqeeyaan. Guji "Start" si ay u bilaabaan, inay hubiyaan in batteriga aad telefoonka ee ka badan tahay 20% lagu eedeeyay ka hor inta aadan samayn.
Markaas ah codsiga magacaabay Codsiga Superuser arbushin doonaa saabsan telefoonka. Guji "ogolow" si ay u gudato (note: waxa ay u muuqan karaan wax ka badan hal mar, guji "ogolow" ilaa ay baaba'aan.). Back to Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) , guji "Start" si ay u bilaabaan baaritaan ah.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan fariimaha ka Samsung Galaxy Ace
Barnaamijku wuxuu dhalin doonaa warbixin scan sida soo socota sawirka, halkaas oo aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta recoverable ka dib. Hubi fariimaha aad mid mid, u fiirsada kuwa guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: SMS helay halkan ku jira kuwa aad dhawaan tirtiray (bandhigay in orange) iyo kuwa hadda jira ee aad Samsung Galaxy Ace (bandhigay madow). Waxaad u kala sooci karaa iyada oo la isticmaalayo button ku xusan: Kaliya bandhigay waxyaabaha la tirtiro.
Download version maxkamad free of this software Samsung Galaxy Ace kabashada fariin hoos ku qoran:
Top 10 Android Desktop Maareeyayaasha: Maamul Phone on PC ama PC Maamul on Phone
> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray on Samsung Galaxy Ace